ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သြစတြေးလျ သံအမတ်ကြီး နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သြစတြေးလျ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Nicholas Coppel နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီ တွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး၊ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံရာတွင် သြစတြေးလျ သံအမတ်ကြီးက ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၌ မဲရုံမှူး၊ မဲရုံ အဖွဲ့ဝင်များ သင်တန်း ပေးခြင်းနှင့် မဲရုံဝန်ထမ်း လက်စွဲ စာစောင်များ ပြုစု ထုတ်ဝေခြင်း တို့ကို ကူညီ ထောက်ပံ့ ပေးခဲ့မှု၊ ရွေးကောက်ပွဲကို သြစတြေးလျ လွှတ်တော် အမတ်များနှင့် တက္ကသိုလ် များမှ လာရောက် လေ့လာခဲ့မှုနှင့် နောင်ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက် များအား ဆက်လက် ပံ့ပိုးသွားမည့် အခြေအနေ တို့အား ရှင်းလင်း ပြောကြား ပြီး ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက သြစတြေးလျ နိုင်ငံ၏ ကူညီမှုများသည် ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပ နိုင်ရေး အတွက် များစွာ အထောက်အကူ ပြုပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာ အမှုများအား Open Court ဖြင့် စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပြီး အမှု (၁၀)မှုအား အမိန့် ချမှတ်ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့်အား အသစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းအား Update ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ Voter Education နှင့် လက်စွဲ စာစောင်များ ထုတ်ဝေရာတွင် သြစတြေးလျ နိုင်ငံ အနေဖြင့် ဆက်လက် အကူအညီ ပေးစေလိုကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
၎င်းနောက် သြစတြေးလျ နိုင်ငံ၏ မဲပေးမှုစနစ်၊ လွှတ်တော် (၂) ရပ်အား ရွေးကောက် တင်မြှောက်မှု စနစ်၊ မဲရုံများတွင် မဲပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ် များနှင့် မဲရေတွက်ပုံ တို့အား သံအမတ်ကြီးကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများ ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့မှ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ လာရောက်တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများ ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ (MILI)မှ ဦးနေလင်းစိုးနှင့် တာဝန်ရှိသူ များအား ယနေ့နံနက် ၉ နာရီ တွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး၊ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် (MILI)အဖွဲ့ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် ဦးနေလင်းစိုးက အသင်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်း တင်ပြပြီး မသန်စွမ်းသူများ အနေဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလမတိုင်မီ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမြင်အာရုံ ချို့ယွင်းသူများ အတွက် အထူး ပြုလုပ်ထားသော Template ပြား အသုံးပြု၍ မဲပေးနိုင်သည့် စံပြမဲရုံများ ဖွင့်လှစ် ပေးခဲ့မှုကြောင့် မျက်မမြင်များ ကိုယ်တိုင် ဆန္ဒမဲ ပေးနိုင်ခဲ့မှု၊ မသန်စွမ်းသူများ မှတ်ပုံတင် ဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင် ရရှိလာပါက မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းပြုစုရာတွင် မသန်စွမ်းမှု အခြေအနေအား ခွဲခြား ပြုစုပေးနိုင်ရေး၊ ဉာဏ်ရည် မသန်စွမ်းသူ များအား စိတ်ပေါ့သွပ် သူများနှင့် ခွဲခြား၍ မဲပေးခွင့် ပြုနိုင်ရေးနှင့် နောင်ရွေးကောက်ပွဲ များတွင် မသန်စွမ်းသူများ အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် ဆက်လက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားမည့် ကိစ္စရပ်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများ ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပြီး မသန်စွမ်းသူများ လွယ်ကူစွာ မဲပေးနိုင်ရေး အတွက် မူဝါဒပိုင်း ဆိုင်ရာအရ လည်းကောင်း၊ နည်းဥပဒေ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ပိုင်း ဆိုင်ရာအရ လည်းကောင်း ကူညီဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဗြိတိန် သံအမတ်ကြီး နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဗြိတိန် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Andrew Patrick နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး၊ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအမှု (၄၂)မှုအား အမြန်ဆုံး ပြီးပြတ်နိုင်ရေး အတွက် Open Court ဖြင့် စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပြီး မီဒီယာများ၊ Observer များအနေဖြင့် လာရောက် လေ့လာ နိုင်ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့်အား အသစ် ပြည်လည် ဖွဲ့စည်းသွားမည် ဖြစ်ပြီး လစ်လပ် မဲဆန္ဒနယ်များ အတွက် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးရန် လွှတ်တော်မှ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ လာပါက ကျင်းပ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နောင်ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပရာတွင် လက်ရှိ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းအား Update ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပြီး မဲစာရင်း မှန်ကန်ရေး အတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မဲစာရင်းအား ပြည်သူလူထုမှ ယုံကြည် လက်ခံမှု ရှိရေးနှင့် စနစ်ကျနသော ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပနိုင်ရေး အတွက် နိုင်ငံတကာ၏ နည်းပညာ အကူအညီ လိုအပ်ပါကြောင်း ပြောကြားရာ ဗြိတိန် သံအမတ်ကြီးက မဲစာရင်းပြည့်စုံ မှန်ကန်ရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့်အတူ အားလုံး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် မဲစာရင်း ပြုစုရာတွင် UKAid, IFES တို့မှတစ်ဆင့် နည်းပညာ အကူအညီများ ဆက်လက် ပံ့ပိုး ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
တပ်မတော်သားတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၄)ဦး အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်း
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၉(က)(၂)အရ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၄)ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး တရားခွင်(၄)ခုဖြင့် ၂၅-၄-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှစ၍ စစ်ဆေးရန်ကျန်ရှိသည့် ကန့်ကွက်လွှာအမှု(၄၀)မှုကို အမြန်ပြီးပြတ်နိုင်ရေး အတွက် နေ့စဉ်ရုံးထိုင်စစ်ဆေးလျက်ရှိရာ ၁၂-၅-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၁) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မြင့် ဦးဆောင်သည့်ခုံအဖွဲ့က ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ်(၁)ကို ဆက်လက်စစ်ဆေး ခဲ့ရာ လျှောက်ထားသူ(၂) ဒေါ်နန်းထွေးမှုံက ကန့်ကွက်လွှာရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထား ချက်အပေါ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေပုဒ်မ ၉၆(က) နှင့် တရားမကျင့်ထုံး ဥပဒေအမိန့် ၂၃ ၊ နည်း(၁)အရ ကန့်ကွက်လွှာကို ရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုပြီး ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေ ၉၆ (င)(၁)အရ လျှောက်ထားသူ(၂)ဒေါ်နန်းထွေးမှုံက လျှောက်ထားခံရသူ ဦးညီစိန်နှင့် လျှောက်ထားသူ (၁) ဦးစိုင်းဆာလူတို့အား ရုံးကုန်ကျစရိတ် ၅၀၀၀ဝိ/- စီ ပေးစေရန် အမိန့်ချခဲ့သည်။ ဦးစိုင်းဆာလူ ၏ ကန့်ကွက်လွှာအမှုကို ဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၁) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မြင့်ဦးဆောင်သည့် ခုံအဖွဲ့က ကန့်ကွက်လွှာ အမှုအမှတ်(၈) လျှောက်ထားသူ ဦးခိုင်ညီညီကျော် (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)နှင့် လျှောက်ထား ခံရသူ ဦးအောင်ကျော်ညွန့်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)အမှုကို ဆက်လက်စစ်ဆေး ခဲ့ရာ ဗထူးတပ်နယ်မဲရုံအမှတ် (၁) နှင့် (၂)တို့တွင် လျှောက်ထားသူနှင့် လျှောက်ထားခံရသူတို့ ရရှိခဲ့သည့်မဲရလာဒ်များကို ပယ်ဖျက်လိုက်လျှင် လျှောက်ထားသူရရှိသည့်ခိုင်လုံမဲစုစုပေါင်းမှာ (၁၈၇၁၇)မဲဖြစ်ပြီး၊ လျှောက်ထားခံရသူရရှိသည့် ခိုင်လုံမဲစုစုပေါင်းမှာ(၁၅၂၁၁)မဲဖြစ်၍ လျှောက် ထားသူက လျှောက်ထားခံရသူထက် ခိုင်လုံမဲ (၃၅၀၆)မဲ ပိုမိုရရှိသွားသဖြင့် လျှောက်ထားခံရသူ အား ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၏ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်၍ လျှောက်ထား သူသည်သာ ခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိပြီး ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)၏ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာပေးစေသည့် အနိုင်ဒီဂရီ ကို စရိတ်နှင့်တကွ ချမှတ်ပေးကြောင်း သိရှိရသည်။
ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၄)ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှတင့်ဦးဆောင်သည့် ခုံအဖွဲ့သည် ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ်(၄၂)မှ လျှောက်ထားသူ ဦးစိုးစိုး(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ)နှင့် လျှောက်ထားခံရသူ ဦးမောင်မောင် (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)၊ အမှုအမှတ် (၄၄)မှ လျှောက်ထားသူ ဦးစန်းမောင် (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)နှင့် လျှောက်ထား ခံရသူ ဦးသိန်းဟန်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)တို့ကို တရားခွင်(၄)၌ စစ်ဆေးခဲ့ရာ ခုံအဖွဲ့ရှေ့မှောက်တွင် နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီအချိန် အမှုခေါ်ရာ ကန့်ကွက်လွှာ အမှုအမှတ် (၄၂)နှင့် (၄၄)တို့မှ လျှောက်ထားသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ရှေ့နေများ ရုံးတော်သို့လာရောက်ခြင်းမရှိဘဲ လျှောက်ထားခံရသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ ရှေ့နေများသာရုံးတော်သို့လာရောက်သည်၊ လျှောက်ထား သူပြ သက်သေများစစ်ဆေးရန် နံနက်(၁၀:၃၀)နာရီ အချိန်ထိ စောင့်ဆိုင်းရန် ခုံအဖွဲ့ကဆုံးဖြတ် သည်။ နံနက် (၁၀:၃၀)နာရီအချိန်တွင် ဒုတိယအချိန် အမှုခေါ်သော်လည်း လျှောက်ထားသူများ ဘက်မှ လာရောက်ခြင်းမရှိသဖြင့် လျှောက်ထားခံရသူများ၏ ရှေ့နေများက တရားမကျင့်ထုံး ဥပဒေအမိန့် (၉)၊ နည်းဥပဒေ ၈ အရ အမှုအား ပလပ်ပေးရန် လျှောက်ထား သည်။ ခုံအဖွဲ့က အမှုမှာ လျှောက်ထားသူပြသက်သေများစစ်ရန် ချိန်းဆိုထားသော်လည်း လျှောက်ထားသူများ ဘက်မှ အမှုသည်နှင့် ရှေ့နေမည်သူမျှ မလာရောက်ကြောင်း၊ အချိန်ပေး၍ စောင့်ဆိုင်းသော်လည်း မလာရောက်ပျက်ကွက်ကြောင်း၊ လျှောက်ထားခံရသူများမှ ကန့်ကွက်လွှာ နှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ခံ ထားခြင်းမရှိကြောင်း တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိန့် ၉၊ နည်းဥပဒေ ၈ အရ အမှုများအား ပလပ် ကြောင်း အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း (DRI) အဖွဲ့ မှ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင် Ms. Charlemagne Sophia Gomez အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းသည် ယနေ့နံနက် ၉ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး၊ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌Democracy Reporting International (DRI) အဖွဲ့ မှ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင် Ms. Charlemagne Sophia Gomez အား လက်ခံ တွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၌ အရပ်ဘက် လူမှု အဖွဲ့အစည်း များမှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု၊ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် CSO များအနေဖြင့် ပိုမို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် Capacity Building မြှင့်တင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရာ၌ DRI အဖွဲ့မှ အကူအညီ ပေးနေမှု၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့်နှင့် လွှတ်တော်များတွင် အမျိုး သမီးများ ပိုမို ပါဝင်လာရေး၊ အနာဂတ်တွင် ကော်မရှင်နှင့် CSO များအကြား ပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာ မူဘောင်များ ပြင်ဆင်ရာတွင် CSO များအနေဖြင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မှု တို့ကို ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
၂၇-၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင်ရှိသည့် ကန့်ကွက်လွှာအမှုများစာရင်း